Home News Barakac xoogan oo Buulo barde ka bilaawaday kadib fatahaada Webiga
Barakac xoogan oo Buulo barde ka bilaawaday kadib fatahaada Webiga
Wararka laga helaayo Degmada Buulo Barde ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in halkaasi uu ka soconayo barakac ay samaynayan dadka deegaanka, ka dib markii uu Webiga Shabelle bilaabay in uu halkaasi ku fataho.
Shacabka ku dhaqan Degmada Buulo Barde ayaa Sabtidii bilaabay in ay guryahooda ka cararaan, iyagoo gaaraya deegaanada ka baxsan degmadaasi ee aanay saamayn fatahaadaha Webiga Shabelle.
Wariye-yaasha ayaa soo sheegaya in W ebiga Shabelle uu maalmihii la dhaafay ku fatahaayay Degmada Buulo Barde, balse uu Sabtidii shalay sameeyay fatahaaddii ugu darneyd, taasoona dadka ku khasabtay in ay guryahooda ka cararaan.
Wariye-yaasha Gobolka Hiiraan ayaa soo sheegaya in Axada maanta ah uu barakac hor leh ka soconayo Degmada Buulo Barde, ayna dadku ka cararayaan waxyeelo ka soo gaarta fatahaadaha.
Liibaan Cabdi Nuur (Burisow), Gudoomiyaha KMG ee Degmada Buulo Barde ayaa sheegay in fatahaadaha Webiga Shabelle ay kala jareen labada qaybood ee degmadaasi, ka dib markii ay biyo badan soo galeen.
Waxaa uu sheegay in fatahaadaha oo xoogoodu ka jira Bariga Buulo Barde ay kala qaybiyeen Bariga iyo Galbeedka Degmada, iyadoona ay go’an yihiin inta badan wadooyinka, waxaana uu hakad ku yimid sida uu sheegay isu socodkii gaadiidka ee buundada.
Fatahaadaha ka jira Degmada Buulo Burde ayaa ku soo aadaya, xilli fatahaado xoogan ay halakeeyeen Magaalada Baledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan, iyadoo dadkii magaaladana ay ku riixeen in ay guryahoodu ka barakacaan.